श्याम श्रेष्ठ काठमाडौं, ४ फागुन
दिल्लीमा विजय, नेपालमा झड्का
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले नेतृत्व गरेको आम आदमी पार्टी (आप)ले भारी बहुमत हासिल गरेको छ । ७० सिटको विधानसभामा ऊ एक्लैले ६२ सिट हासिल गरेर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई फेरि एक पटक लज्जास्पद हार व्यहोर्न विवश बनाइदिएको छ ।
देशभर साङ्गठनिक संरचना भएको धेरै पुरानो शक्तिशाली दल भारतीय कांग्रेसले त यस निर्वाचनमा एक सिट पनि ल्याउन सकेन ।
आपको यो जीत यस कारणले पनि उल्लखनीय रहेको छ कि दिल्लीमा यस पटक भाजपाले चुनाव जित्न निकै ठूलो शक्ति र स्रोत परिचालन गरेको थियो । २०० जना सांसदको विशाल हुल र लोकसभा चुनाव प्रचारका महारथी गृहमन्त्री अमीत शाह आफैँ यसका लागि जीउ ज्यान लगाएर खटेका थिए ।
मुलुकभरको लोकसभामा भाजपालाई भारी बहुमत हासिल भएपछि त्यसको प्रभाव दिल्लीमा पनि पर्छ भन्ने पूर्वानुमान धेरैको थियो । तर, यथार्थमा भने यो सही देखा परेन ।
त्यति ठूलो राजनीतिक फौजको दौडधुप, राज्ययन्त्रको पूरापूर प्रयोग र राष्ट्रिय मिडियाको व्यापक परिचालनले समेत आम आदमी दलको आमजनसमुदायमा रहेको प्रभाव थोरै पनि घटेन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जादूमयी भाषणले पनि त्यहाँ काम गरेन ।
सारा प्रयासका बाबजुद सन् २०१५ को चुनावमा जस्तै आम आदमी दलको ५४ प्रतिशत लोकप्रिय मत यस पटक पनि टसको मस भएन । भाजपाले केवल भारतीय कांग्रेसको र अन्य दलको लोकप्रिय मत आफ्नो पक्षमा तान्न सक्यो । भाजपाले पहिलेभन्दा ५ सिट र ६ प्रतिशत लोकप्रिय मत त बढायो तर आपको ९० प्रतिशत बहुमत भएको विधानसभामा त्यसले खासै केही अर्थ राखेन ।
यस चुनावले के सन्देश प्रवाहित गरेको छ भने हजार राज्यशक्तिका अधिकार र सय चोटिला भाषणभन्दा दुई–चारवटा जनमुखी कामको प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली हुन्छ । दल विशाल हुँदैमा र साथमा राज्यसत्ता हुँँदैमा मात्र चुनाव जितिने होइन । राम्रो काम गर्‍यो भने भर्खरै उदाएको सानो दलले समेत भीमकाय पार्टीलाई निर्वाचनमा धुलो चटाउन सक्छ ।
जनमुखी काम गर्नका लागि कुनै दलले ठूलो सिद्धान्त बोकेको हुनुपर्र्दैन, आफ्नो घोषणामा इमान्दार र जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भए पुग्छ ।
सन् २००२ देखि ‘परिवर्तन’ नामक एउटा एनजीओमा काम गरेका, एनजीओबाट अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी सत्याग्रह आन्दोलनमा सामेल भएका र त्यहीँको निराशाबाट सन् २०१२ देखि दलीय राजनीतिमा हाम्फालेका केजरीवाल कुनै खानदानी राजनीतिज्ञ होइनन् ।
आजभन्दा एक दशकअघिसम्म उनको दल आम आदमी पार्टीको भारतीय दलीय राजनीतिको सूचीमा नामोनिशान थिएन । भारतीय समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र यथास्थितिप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको चाहनाले नै उनलाई राजनीतितर्फ डोहोर्‍याएको देखिन्छ ।
उनी कुनै समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तले लैस नेता पनि होइनन् । केजरीवालत हरेक दिन हनुमान–चालिसा पाठ गर्ने र आफ्नो जीतवाजीको दिनसमेत पार्टी कार्यालयदेखि हनुमानको मन्दिरसम्म विजय जुलुस गर्ने खालका धर्मभीरु सर्वसाधारण नेता हुन् । उनले.आफ्नो जीतको श्रेयसमेत मतदातालाई नदिएर हनुमानलाई दिएका छन् ।
उनको दलको भारी विजयको मुख्य कारण उनका त्यस्ता केही लोककल्याणकारी काम हुन्, जसले आमनागरिकको प्रत्यक्ष रूपमा भलाइ गर्छ । ५ वर्षको कार्यकालमा उनले दिल्लीमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको स्तर माथि उठाउने काम गरे । सार्वजनिक विद्यालयमा २० हजार नयाँ कक्षा कोठा थपिए । राजधानीमा उनले ४ सयभन्दा बढी छिमेकी क्लिनिक खोले, जहाँ निःशुल्क रूपमा तथा सस्तोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ ।
उनले सार्वजनिक अस्पतालको सेवाको स्तर पनि माथि उठाए । विद्यार्थी र महिलाका लागि उनले सार्वजनिक बसमा निःशुल्क यात्राको प्रबन्ध गरे । हरेक घरलाई २ सय युनिटसम्मको बिजुली र २० हजार लिटरसम्मको पानी उनले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराए । जम्माजम्मी उनको कार्यकालमा उनले गरी भ्याएका काम यति नै हो ।
यिनै जनमुखी कामका बलमा उनले यस पटकको चुनावमा पनि गत चुनावमा जस्तै दिल्लीलाई अभेद्य किल्ला बनाउन सकेका हुन् । चुनावमा अरू सबै दलले उनको खिल्ली उडाए । उनले चाहिँ अरू केही नगरीकन केवल आफूले गरेको कामको मात्र प्रचार गरिरहे । अन्ततः कामले जित्यो, अफवाह र विरोधले दिल्लीका आममतदातालाई अलिकता पनि छुन सकेनन् ।
आपले दिल्लीमा गरेको कामको प्रकृति हेर्दा उसका सबै कामहरू विपन्न र निम्नमध्यम वर्ग लक्षित देखिन्छन् । दिल्लीमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या पनि त्यही वर्गकै रहेको छ । उनका कामहरू महिला र युवाको मन जित्ने प्रकृतिका पनि छन् । कुनै पनि समाजमा सबैभन्दा धेरै र नडगमगाउने खालको पक्षधरता महिला र युवा, विद्यार्थीकैै हुने गर्छ ।
भाजपाको मुसलमानविरोधी रवैया तथा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकले भारतभरका मुसलमानहरूलाई क्रुद्ध बनाएको थियो । त्यसमाथि थप, दिल्लीमा मात्र १३ प्रतिशत मुसलमानको बसोवास रहेको छ । तिनले पनि भाजपाको विकल्पमा आपकै पक्षमा मतदान गरे ।
भाजपालाई हराउन सक्ने कुनै असल विकल्प नहुँदा परिवर्तन पक्षधर बौद्धिकहरूको रोजाइ पनि आप नै बन्यो । यी सबै कुराको कुल योगले आम आदमी पार्टीले यति ठूलो बहुमत हासिल गरेको हो ।
यसका साथसाथै दिल्लीका मतदाताले अरू कुनै दलमा भन्दा केजरीवाल र उनको आम आदमी दलका उम्मेदवारमा आफू जस्तै सर्वसाधारणपना पनि ज्यादा देखे ।
दिल्लीमा केजरीवालको विजयले नेपालको सत्तारुढ नेकपामा ठूलो झड्का लागेको हुनुपर्छ । समाजवादी सिद्धान्तको हिङ भएको टालो पनि नबोकेको आम आदमी दलले सर्वसाधारण विपन्न वर्ग र निम्नमध्यम वर्गको भलाइ गर्ने कार्यक्रमहरू ५ वर्षमै ५–७ वटा भटाभट गरेर देखाउन भ्याउने । तर, समाजवादी सिद्धान्तको रेशमी च्यादर ओढेको नेकपाले शासन गरेको २ वर्ष बित्दा पनि गरिब तथा गरी खाने वर्गको हित हुने एउटा पनि संसारलाई देखाउन लायक काम गर्न नसक्ने । यस्तो किन र कसरी भयो ?
सिद्धान्तहीन केजरीवालले पाँचै वर्षमा दिल्लीको सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठाउन सक्ने तर समाजवादी सिद्धान्त अनुसरण गरेको भनेर दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उठाउने काम गर्नुको ठीक उल्टो रहेबचेका सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि निजी क्षेत्रका नाफाखोर शैक्षिक माफियाले जिम्मा लिइदिनुपर्‍यो भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्ने ! योभन्दा ठूलो विरोधाभाष अरू के हुन सक्छ ?
दिल्लीमा जस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक विद्यालय र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्तर माथि उठाउने किन हुन सक्दैन ? वामपन्थीको दुई तिहाईको सरकार भएका बेलामा जहाज र रेलका ठूलाठूला भाषण दिनुको सट्टामा नेपालमा पनि निम्न वर्गको हित हुने तात्त्विक महत्त्वका ससाना दुई–चारवटा काम किन गर्न सकिँदैन ?
एमालेको पहिलो अल्पमतीय शासनकालमा गरिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता ससाना दुईवटा कामले आमनागरिकमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेवित्तिकै अहिले पनि जुन खालको लोकप्रिय छवि बनेको छ, त्योभन्दा सुन्दर छवि खडा हुने र कम्युनिस्ट पार्टीको ब्राण्ड नै खडा हुने खालका दुई–चारवटा रूपान्तरणकारी काम वामपन्थी सरकारले किन गर्न सक्दैन ?
यस्तो काम गर्न केले रोक्छ उसलाई ? कुनै राम्रो काम गर्न आफ्नो बुताभन्दा बाहिरको शक्तिले छेक्नु र त्यो खोजेर पनि गर्न नपाउनु एउटा कुरा हो तर रूपान्तरणकारीm जनहितकारी राम्रो काम गर्न खोज्दै नखोज्नु अर्को कुरा हो । अहिले दिल्लीको चुनावले नेपालमा पैदा गरेको प्रश्न के हो भने नेपालको दुई तिहाईको वाम सरकार केजरीवालजति पनि रूपान्तरणकारी र जनहितकारी काम गर्ने किन हुन सक्दैन ?
दिल्लीको चुनावबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने जति भ्रम फैलाउन खोजे पनि आमनागरिकले पटक्कै नबिर्सने खास नेताको अमुक समयको भाषण होइन, उसको समाज–रूपान्तरणकारी काम हो । देश र जनताको हित हुने काम हो । नेपालका नवोदित र अस्तित्वमा आउन लागेका साना दललाई पनि आपको विजयले आशालाग्दो सन्देश दिएको छ ।
राम्रो काम गर्‍यो भने सानो दल पनि निकै छिटो ठूलाठूला दललाई धक्का दिने ठाउँमा आइपुग्न सक्छ भनेर यसले छर्लङ्ग देखाएको छ । दल अहिले सानो भयो भनेर कोही पनि हतास हुनुपर्दैन । उनीहरूले जनताको मन जित्ने खालका सानासाना तर गहन महत्त्वका काम गर्न थाल्ने हो भने ठूला भनिएका दललाई समेत त्यसरी दौडमा धेरै पछि पार्न सकिन्छ, जसरी आपले दिल्लीमा भाजपा र भारतीय कांग्रेसलाई पछि पार्‍यो ।
आम आदमी दलको भारी विजयको घटना दिल्लीमा मात्र हुन सक्ने कुनै अपवादको घटना होइन । आपले गरेजस्तो काम पनि अपवादको काम होइन । महिला, युवा, गरिब र निम्न वर्गको हित हुने काम, सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यको स्तरलाई माथि उठाउने काम पनि सरकारमा गएको, नगएको हरेक दलले अहिले र यहीँ गर्न सक्ने काम हो ।
भाजपा खुम्चिनेतिर, आप फैलिनेतिर
दिल्लीमा भाकपाको नराम्रो हारपछि प्रश्न उठेको छ– के यो भाजपाको सबैतिर लोकप्रियताबाट ओर्लिएको ग्राफको सङ्केत हो ?
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउँदा भारतका सातवटा राज्य, विधानसभामा मात्र भाजपाको राज थियो । सन् २०१८ को प्रारम्भमा पुग्दा भारतका २१ वटा विधानसभामा भाजपाले बहुमत हात पार्‍यो र शासन गर्‍यो । तर, त्यसयता भाजपा राज्य विधानसभाको चुनावमा जताततै ओरालो लागेको लाग्यै छ ।
सन् २०१८ को अन्त्यतिर भएको चुनावमा ऊ मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढको विधानसभामा बहुमत ल्याउन असफल भयो । सन् २०१९ को चुनावमा महाराष्ट्र र झारखण्डको विधानसभामा पनि उसको बहुमत कायम रहन सकेन । अहिले उसले दिल्लीमा हारेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने उसले जुनजुन मुद्दा लिएर लोकसभाको चुनाव लडिरहेको छ तथा जितिरहेको छ, ती मुद्दा विधानसभाको चुनावका लागिचाहिँ प्रभावकारी र जनआकर्षणकारी सिद्ध भएका छैनन् ।
विधानसभामा राज्यका मतदाताले अर्कै मुद्दालाई रुचाइरहेका छन् । भाजपाको राज्य तहको पार्टी नेतृत्व पनि संघीय पार्टी नेतृत्वजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यही कारणले लोकसभाको चुनावमा भारी मतले जित्दाजित्दै पनि भाजपाको राज्यहरूमाथिको पकड क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । अझ घट्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ ।
तर, आप भने दिल्लीको अपार सफलतापछि ऊ त्यहीँ सीमित भइरहने छाँटकाँट छैन । ऊ अब त्यहाँबाट दक्षिण र उत्तर भारततिर विस्तारित हुने सम्भावना देखिँदै छ ।
आप सुरुमा दलको रूपमा आउँदा उसले भनेको थियो कि यो आममानिसको दल हो । त्यसैले यो दलको ‘हाई कमाण्ड’ हुनेछैन । अहिले पाँचै वर्षमा यसको हाई कमाण्ड देखापर्दै छ । हाई कमाण्डले कतिपय नेतालाई दलबाट निश्काषित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ ।
सत्तामा जाँदा यसले सुरुमा आमनागरिकका लागि काम गर्ने बाचा गरेको थियो । त्यो बाचा एक हदसम्म उसले पूरा गर्‍यो पनि । अब तेस्रो कार्यकालमा पनि उसले बाचा पूरा गर्ने काम नै गर्नेछ त ? त्योचाहिँ व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ ।
कुनै पनि दल स्थिर रहने कुरा होइन, समय र परिवेशमा त्यो बदलिन्छ नै । बदलिँदा बदलिँदै पनि पहिलेजतिकै त्यो जनमुखी, लक्ष्य उन्मुख र स्वच्छ भइरहनु ठूलो कुरो हो । के आप त्यस्तो भइरहन सक्ला ? प्रश्न उठ्ने ठाउँ एकपछि अर्को गर्दै पैदा हुँदै छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६, १२:५३:००
गणतन्त्रका रैतीका नाममा
नवराज ‘हत्या’ले उजागर गरेका गम्भीर पाटा
केपी ओलीकाे लज्जास्पद पराजय
कोरोना विजयमा जापान, कोरिया र क्युबाको अनुभव
कोरोना त्रासः सिंहको शिकार गर्न झिँगा मार्ने रिहर्सल
समावेशिता बढ्दा नबदलिएको पुरुष मानसिकता
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला